प्रदेश सांसदको प्रस्नः पहिचानवादी हुँ भनेर फुर्ति लगाउनेहरु कहाँ छन् ? - समायोजन खबर
प्रदेश सांसदको प्रस्नः पहिचानवादी हुँ भनेर फुर्ति लगाउनेहरु कहाँ छन् ?
प्रदेश नम्बर १ का सांसद रामकुमार राई (पासाङ)
प्रदेश नम्बर १ का सांसद रामकुमार राई (पासाङ)ले आफूलाई पहिचानवादी हुँ भनेर फुर्तिलाउनेहरु नामकरणको छलफल चल्दा कहि कतै नदेखिएको बताए । किरात राई विद्यार्थी संघको खोटाङ दिक्तेलमा आयोजित नवौं राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै सांसद राईले सो कुरा बताएका हुन । आफूलाई पहिचानवादी भनेर फुर्ति गर्ने तर प्रदेश १ को नामकरण बारे छलफल भइरहदा सडक र सदनमा कही सहभागि नभएको सांसद राईको भनाइ थियो । सदनमा छलफल सुरुहुन लाग्दा आफूलाई पहिचानको ठेकेदारी ठान्नेहरु सदनमा खरो रुपमा उत्रिनु पर्ने वेलामा केही नबोलेको बताए ।
संघको कार्यक्रममा केही वक्ताहरुले नामकरणको सवालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले पहिचानको आधारमा नाम राख्न नचाहेको मन्तव्य राखेपछि सांसद राईले सो कुरा बताएका हुन् । सांसद राईको ठाडो प्रस्न थियो ‘आपूmलाई पहिचानवादी भनेर फूर्ति लाउने समाजवादी पार्टी नेपाल सदन र सडक कहाँ छ ?’ प्रदेश नम्बर १ को नाम किरात राख्नु पर्ने अडान राख्दै आएका राईले भने ‘हामी आफ्नै पार्टी र सदनमा प्रदेशको नाम किरात राख्न लडिरहेको छौ ।’ केही हप्ता अघि प्रदेश १ को नामकरन बारे सदनमा औपचारिक छलफल चल्दा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमको समानुपातिक सांसद राधा थापाले कोशी प्रदेशको पक्षमा विचार राखेका थिए ।
कोशी प्रदेशमा समर्थन गर्ने र पहिचानको पक्षमा लडिरहेको सांसदको घर घेराउ गर्ने फूर्ति दिने ? आक्रोशित हुँदै सांसद राईले प्रस्न गरे ‘‘हामी गणतन्त्र र संघीयताको लागि शसस्त्र युद्धमा हुँदा तिमीहरु कहाँ थियौ, मञ्च पाइयो भन्दैमा मनपरी बोल्ने ?’’ नामको सन्दर्भमा सत्तापक्षीय बहुमत सांसदहरुले नेकपा केन्द्रीय तहबाट आएको मौखिक आदेशलाई अस्वीकार गर्दै किरातको पक्षमा अडान राख्दै आएका छन् । कार्यक्रमको प्रमुख अथितिसमेत रहेका किरात राई यायोक्खा केन्द्रीय अध्यक्ष दिवस राईले प्रदेशको नाम किरात राख्ने सवालमा सडक र सदन अभियानमा यायोक्खा बाहेक कोही नभएको बताए । आफूलाई पहिचानको राजनीति गर्छु भन्नेहरुले १ नम्बर प्रदेश संसदमा बहस चल्दा सडक र सदनमा आगो बाल्नु पर्नेमा चुपचाप बस्नेहरुलाई कसरी पहिचानवादी भन्ने ?
प्रदेश १ को नाम किरात राख्न जोडदार पहल गरिरहनुहुने सांसदहरुलाई थप उत्साहित भएर लाग्न अध्यक्ष राईको आग्रह थियो । इतिहास, भूगोल र सभ्यताको आधारमा प्रदेशको नाम किरात राख्न डटेर लाग्ने सांसदहरुको नाम प्रदेशका जनताले सुनौलो अक्षरले लेख्ने राईको भनाइ थियो । यो बेला किरात नाम राख्न पहल गर्ने सांसदहरुलाई निरुत्साहित गरेर राजनीतिक स्वार्थमा लाग्नु नहुने राईको भनाइ थियो ।
संविधान सभा सदस्य अस्मिता कार्कीले प्रदेशको नाम किरात राख्न नेकपा लाग्ने बताए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका जिल्ला नेता राम दंगालले प्रदेशको नाम किरात राख्न पार्टीले पहल गर्ने बताए । पहिचानको मुद्धा नेकपा कै भएको दंगालको भनाइ थियो ।
किरात राई विद्यार्थी संघको अध्यक्ष बिर्सिका राईको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा संस्थापक भीम राई, पूर्व अध्यक्ष भोगीराज राई, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको प्रमुख दिपनारायण रिजाल, संघीय विद्यार्थी फोरमका रविन खम्बू, अखिल क्रान्तिकारीका माया राई, नेपाल विद्यार्थी संघको राजकुमार बस्नेत, खोटाङ उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष उपेन राई, यायोक्खा केन्द्रीय उपमहासचिव भीम राई, किरात राई पत्रकार संघ केन्द्रीय अध्यक्ष भीम राई लगायतले शुभकामना मन्तब्य राखेका थिए । नगर प्रमुख दिपनारायण रिजालले प्रदेशको नाम किरात राख्नु पर्ने बताए ।
रिजालले नगरपालिका र प्रदेशको सहकार्यमा १४ करोडको लागतमा विश्वकै सवभन्दा अग्लो यलम्बरको मूर्तिसहितको यलम्बर पार्क निर्माण सुरु भएको बताए । कार्यक्रममा यायोक्खा केन्द्रीय सचिव अर्जुन जम्नेली राई, कोषाध्यक्ष देवान राई, संघको पूर्व अध्यक्षहरु रविन राई, धिरेन्द्र रुम्दाली, उपाध्यक्षहरु दिपेन वाला राई, दिपेन्द्र रुम्दाली, सचिवहरु अवि राई, नवीन राई लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
उद्घाटन अघि ‘कोशी प्रदेश जान्दैनौ, १ नम्बर प्रदेश मान्दैनौ’ ‘किरात प्रदेश घोषणा गर’ लगायतको नारा लगाउदै दिक्तेल बजार परिक्रमा गरेका थिए । उद्घाटन कार्यक्रममा कलाकार राई नवीन, श्रेया राई, केबी राई, वेनुका राईले गीत प्रस्तुत गरेर मनोरञ्जन दिएका थिए भने शुभम फाउण्डेसनका कलाकारहरुले नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए । राष्ट्रिय सम्मेलनले आगामी २ बर्षको लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने सम्मेलन आयोजक समिति संयोजक बिर्सिका राईले बताईन् ।
२०७६ बैशाख २७ गते बिहान ९ :३० मा प्रकाशित